BNI Madagascar : vonona amin’ny fanarenana ny orinasa | NewsMada
BNI Madagascar : vonona amin’ny fanarenana ny orinasa
Miara-miasa hatramin’izay amin’ireo mpandraharaha sy orinasa ny banky BNI. Ny 25 novambra teo, nisy ny fihaonana tamin’ireo mpikambana ao amin’ny Ante­ni­mi­eran’ny varotra sy indostria, France-Madagascar. Fa­no­mezan-toky fa azo antoka sy manana traikefa amin’ny fandraharahana ny BNI amin’izao fotoan-tsarotra hanarenana toekarena izao. Nam­pahafantarina tamin’io fotoana io ireo tolotra samihafa misy ao aminy, sy ny vahaolana mifandraika amin’izao Covid-19 izao.
Nampahalalana ireo karazana fampindramam-bola aha­zoana manampy ireo orinasa ho fanalefahana ny akon’ny krizy fahasalamana amin’ny fihariana ataon’izy ireo. « Tsorina ny fombafomba fampindramam-bola, ny fanafohezana ny fe-potoana handinihana izany, sy ny famoaham-bola haingana, hanampiana ireo orinasa, noho ny hamehana », araka ny fanazavana nomen’ny BNI.
Amin’ny maha mpiara-miombona antoka amin’ny Antenimieran’ny varotra eto Antananarivo (CCIA) ny BNI, nisy ny famelabelaran-kevitra, omaly teo An­ta­ni­mena, momba ny fampindramam-bola amina zana-bola ambany ho an’ireo orinasa tena madinika (TPE). Natao izany noho ny faha-100 taona ny CCIA, sy nanambarana fa manohana hatrany ny orinasa tena madinika ny BNI.